Fantaro i Veronika Rusinova avy any amin’ny tanin’ny mazava alina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jolay 2019 5:12 GMT
Alina mazava any Arkhangelsk. Saripikan'i Alexander Kozlov ary nampiasana lisansa CC BY-NC-ND 2.0.
Zava-mahatalanjona voajanahary mitranga eo afovoan'ny lohataona any amin'ny ila bolantany avaratra ny Mazava Alina. Afaka mankafy ny hazavana misitery izay maharitra hatramin'ny alina ireo monina ao amin'ny vondrom-piarahamonina manakaiky ny faritra ambanin'ny Faribolana Arktika satria tsy milentika any amin'ny fara vodilanitra ny masoandro. Fotoana fankalazana izany ho an'ny maro, ary ny iray amin'ireo mpandika teny Lingua Rosiana no lohalaharana amin'izany isan-taona.
Avy any amin'ny tanàndehiben'i Arkhanglesk eo akaikin'ny renirano Dvina ary tena manakaiky ny Ranomasina Mazava i Veronika Rusinova . Mbola mijanona ho seranan-tsambo manan-danja izany saingy ny manintona indrindra voalohany dia ny natiorany eo amin'ny faritra manodidina. Mety tsara ho an'i Veronika satria manampy azy hanohy ny sasany amin'ireo fialamboly tiany indrindra ny natiora toy ny fanaovana ski, ny lomano ary ny dia an-tongotra lavitra.
Manao mpandika teny mahaleotena miasa amin'ny lahatsoratra an-gazety, amin'ny fanadihadiana siantifika na ara-pihariana indrindra amin'ny fandikan-teny avy amin'ny teny Anglisy na Frantsay ho amin'ny fiteny Rosiana i Veronika rehefa tsy mandeha mizaha ny faritra manodidina. Tamin'ny herintaona (2013), nitady asa ho an'ny mpilatsaka an-tsitrapo izy mba hampiharana ny fahaizany mandika teny ary nahita ny Global Voices tamin'ny teny Rosiana. Lasa mpandika teny Lingua ofisialy i Veronika taorian'ny fifampiarahabana tongasoa fohy avy amin'ny tranonkalan'ny toniandahatsoratra, Katya.
Noho izany tamin'ny volana Septambra 2014, nanomboka ho mpilatsaka an-tsitrapo i Veronika niaraka tamin'ny fandikan-teniny voalohany izay nivoaka tamin'ny 2 Oktobra 2014. Nifanandrify tamin'ny lahatsoratra izay nofidiany hadika ny fahalianany amin'ny zon'olombelona sy ny zon'ny vehivavy toy ny setriny tamin'ny fipoahan'ny Ebola tany Sierra Leone sy ny ezaka natao tany Nizeria mba hifehezana ilay virosy.
Tia mitsangatsangana any Rosia sy Eoropa i Veronika, saingy manantena izy indray andro any hitsidika an'i India sy ny toerana hafa rakofan'ny Global Voices. Amin'izao fotoana izao, ahafahana mahafantatra ireo toerana lavitra sady tsy voatery miala ny Mazava Alina ny fandikana teny ao amin'ny Global Voices .